mairie-antananarivo – Fotodrafitrasa etsy amin’ny tany Andohatapenaka
Nanao Fanambarana ny Fiadidiana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny Alakamisy 20 Avrily 2017 tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely tamin’ny alalan’ny Lefitra Faha roan’ny Ben’ny Tanana Julien Andriamorasata fa tsy nisy mihitsy ny Taratasy Fanomezan-dàlana na Permis avy amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ka ahafahana manangana fotodrafitrasa etsy amin’ny tany Andohatapenaka.
Nohamafisiny fa misy tompony izany tany izany sady manana Titre mazava tsara. Fa ny 22 desambra 2016 ny Ministera no namoaka ny ARRETE 28/195-17 MEPATE voalohany amin’ny fanomezan-dalana hanao zavatra amin’io toerana io. Fantatra ihany koa fa efa nisy ny Arrete 147 CUA /Cab 17 tamin’ny 6 Martsa 2017 nalefan’ny Kaominina nampitsahatra ny asa saingy izany Arrêté izany indray no notorian’ny Ministera misahana ny Fanajariana ny Tany izay niafara any amin’ny Tribonaly Administrativa ary tsy mbola nisy valiny hatramin’izao ;marihana anefa fa efa nadalo tany amin’ny “perfect de police” izany arrete izany.
Tsara koa anefa ny mampahatsiahy fa ny 10 janoary 2016 no namoaka Arrêté ny Fanjakana fa tsy azo atao ny manototra tany raha tsy mivoaka ny “Plan d’Urbanisme Directeur”. Nanamafy ny Lefitra Faharoan’ny Ben’ny Tanàna Julien Andriamorasata fa tsy miady amin’ny Fanjakana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra fa manentana ny Fanjakana kosa mba hanara-dalàna. Nentaniny koa ny Total mba hanaraka ny lalàna.
AO ANATY » ny Lalàna, Serasera